आज पाैष २९ गते राशिअनुसारको प्रत्यकको भाग्यफल - Muldhar Post
आज पाैष २९ गते राशिअनुसारको प्रत्यकको भाग्यफल
आजको राशिफल २०७६, २९ पुष मंगलवार
आज मिति २०७६ साल पाैष महिनाको अन्तिम दिन २९ गते मंगलबार रहेको छ । अंग्रेजी पात्रोअनुसार २०२० जनवरी १४ तारिख । मेष-एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंका हातबाट सजिलै धन खर्च भए तापनि – तपाईंका भाग्यशाली ताराले आर्थिक लाभ बनाइ रहनेछन्। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। तपाईंले उनीहरूलाई ध्यान दिनुहुँदैछ भन्ने महसुस गराउन उनीहरूको आनन्द र दुःखमा आफैलाई संलग्न गराउनुहोस्। आफ्नो साथीको अभावमा पनि उपस्थिति महसुस गर्ने सम्भावना छ। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ – र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। यो दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको लागि साँच्चै ठूलो छ। आफ्नो साथी थाहा छ तपाईं उहाँलाई प्रेम कति गरौं।
वृष-आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। साँझको लागि रोमाञ्चक योजना राखेर तपाईंका मित्रहरूले तपाईँको दिन रोशन गर्नेछन्। रचनात्मक प्रकृतिकका कार्यहरूमा संलग्न हुनुहोस्। यात्रा लाभदायी तर महँगो हुनेछ। कामको दबाबले लामो समयदेखि तपाईंको वैवाहिक जीवनमा व्यवधान दिंदै थियो। तर, आज सबै शिकायतहरू समाप्त हुनेछन्।
मिथुन -वारी चलाउँदा होशियार हुनुहोस्। तपाईंको ज्ञान र राम्रो हास्यले तपाईंका वरिपरिका मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्। तपाईंका मुस्कानको कुनै अर्थ छैन – तपाईंका हास्यको कुनै आवाज छैन – तपाईंलाई सामिप्य नहुनाले मुटुले धडकन बिर्सन्छ – नियमित रूपमा आफ्नो जीवनसाथीलाई चकित गराउनुहोस्; अन्यथा उसले महत्वहीन महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ।
कर्कट-तपाईंको अथाह बौद्धिक क्षमताले आफ्नो अशक्ततासँग लड्न मद्दत गर्नेछ। सकारात्मक सोचाइ राखेर मात्र यो समस्यासँग लड्न सक्नुहुन्छ। पैसाको समस्या दिनको पछिल्लो भागमा सुधार हुनेछ। पारिवारिक जिम्मेवारीहरू बढ्नेछन् – जसले तपाईंको मनमा तनाउ ल्याउनेछ। प्रेमको खुशीयाली अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ। कुनै पनि नयाँ संयुक्त उद्यममा आफैलाई संलग्न गर्नबाट जोगिनुहोस् – र तपाईंलाई आवश्यक भएमा आफ्ना घनिष्ट मान्छेको सल्लाह लिनुहोस्। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
शिंह-आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको लागि ध्यान र योग अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईंको जोडीसँग आफ्नो गोप्य जानकारी साझेदारी गर्नु अघि सोच्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने नभन्नुहोस् किनकि उनले अरू कसैलाई यो कुरा भन्न सक्छिन्। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। काममा र घरमा हुने दबावले तपाईंलाई रिसाहा बनाउन सक्छ। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको व्यञ्जनहरुको प्रलोभन् वा अंगालो जस्ता साना मागहरूको बेवास्ता गर्नुभयो भने उनी दुखी हुन सक्नु हुनेछ।
कन्या-आफ्नो वजनमा ध्यान दिनुहोस् र धेर नखानुहोस्। छिमेकीसँग झगडा गर्नाले तपाईंको मुड बिग्रिन सक्छ। तर आफ्नो स्वभाव नबिगार्नुहोस किनभने यसले मात्रै आगोमा इन्धन थप्ने काम गर्दछ। तपाईंले सहयोग दिनु भएन भने तपाईंसँग कसैले झगडा गर्न सक्ने छैन। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंका प्रियले तपाईंलाई खुसी राख्ने कुराहरू गर्नेछन्। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ – र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। आज, तपाईं फेरि आफ्नो जोडीसँग प्रेममा पर्नु हुनेछ।
तुला-आज आफ्नो उँचो विश्वासलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। व्यस्त दिन भए तापनि तपाईँले अझै पनि आफ्नो ऊर्जा फर्काएर ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ। आर्थिकमा सुधार आउनाले तपाईंलाई अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सुविधा हुनेछ। आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको भावनामा चोट लाग्नुबाट जोगिन आफ्नो स्वभावमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। हृदय नगुमाउनुहोस् – असफलता एकदम प्राकृतिक हो र तिनीहरू नै जीवनका सौन्दर्य हुन्। कार्यस्थलमा दक्षता सुधार गर्न आफ्नो कौशल स्तरको सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आज खर्चको कारण आफ्नो जीवनसाथीसँग तपाईंको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ।
वृश्चिक-स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूलाई लिएर आफैंलाई बेवास्ता नगर्नको लागि होसियार हुनुहोस्। तपाईंले आशा गरेझै काम गर्न असफल हुनाले बच्चाहरुले निराश गराउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो सपना पूरा भएको देख्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। प्रेमी जीवन थोरै कठिन हुन सक्छ। आफ्नो रिजुम पठाउन वा साक्षात्कारको लागि राम्रो दिन। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। आज छिमेकीहरूले गलत तरिकामा तपाईंको परिवार र साथीहरूलाई तपाईंका वैवाहिक जीवनको व्यक्तिगत पक्ष पर्दाफास गर्न सक्छन्।
धनु-आज तपाईं आशाको जादू अन्तर्गत हुनुहुन्छ। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। बच्चाहरुलाई अध्ययनमा राम्ररी चासो नराख्नाले स्कूलमा केही निराशा उत्पन्न हुन सक्छ। व्यस्त सडकमा तपाईंले आफुलाई भाग्यमानी भएको महसुस गर्नुहुनेछ किनकि तपाईंकी प्रियतमा सबैभन्दा राम्री छन्। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
मकर-तपाईंको अशिष्ट व्यवहारले आफ्नी पत्नीको मूड बिगार्न सक्छ। अर्कालाई अनादर गर्नाले र कसैलाई नराम्रो व्यवहार गर्नाले सम्बन्धलाई खतरामा पार्दछ भन्ने तपाईंले बुझ्नुपर्छ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। भेटघाट गर्ने अतिथिहरूले सांझ बिताउनेछन्। रोमान्टिक अमूर्तताले तपाईंको आनन्दमा मसला थप्नेछ। तपाईंले आफ्नो कार्यमा प्रमुख निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। समयमा र तेज कार्यले अरूको भन्दा राम्रो धार दिन सक्छ। तपाईंले केही उपयोगी सुझावहरूको लागि आफ्ना अधिनस्थहरूबाट पनि केही सुन्न सक्नु हुनेछ। आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
कुंभ-तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या भएकोले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यमा जान असमर्थ हुनाले केही बाधाहरूको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। तर आफुलाई यसबाट छुटाउन आफ्नो तर्कको प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले चिन्ता गराउँछ र उनलाई केही चिकित्सा हेरविचारको आवश्यकता पर्नेछ। तपाईंले आज प्रेम गर्ने मौका गुमाउनु भएन भने, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा कहिल्यै तपाईंले यो दिन बिर्सन सक्नु हुनेछैन। बाँकी रहेका परियोजना र योजनाहरू अन्तिम आकार लिन उत्प्रेरित हुनेछन्। आज तपाईंले गुलाब झन रातो र नील लोहित झन नीलो देख्नुहुनेछ किनकि प्रेमको नशाले तपाईंलाई माथि पुर्याएको छ।
मीन-स्वभावको चटारोले तर्क र टकराव उत्पन्न गराउन सक्छ। एउटा शिशुको स्वास्थ्यसे केही चिन्ता हुनेछ। प्रेममा भएको निराशाले तपाईंलाई निरुत्साहित गर्ने छैन। आज काममा तपाईंको सफलताको दिन हुनेछ! तपाईंको जोडीले आज तपाईंको दैनिक आवश्यकता पूरा नगर्न सक्छन्, त्यसैले तपाईंको मुड बिग्रिनेछ।